🥇 ▷ Qalabka cusub ee Android 10 ayaa soo baxay laakiin mar horeba wuxuu leeyahay bug xun ✅
Qalabka cusub ee Android 10 ayaa soo baxay laakiin mar horeba wuxuu leeyahay bug xun
Google ayaa hadda sii deysay nooca ugu dambeeya ee Android 10 ee dhammaan jiilalka taleefannada casriga ah ee Pixel Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala aaladdan ayaan nasiib wanaag ku helin casriyeynta.
Hagaag, markii cusbooneysiinta la sii daayay, dhowr warbixinood ayaa sheegtey in taleefanka casriga ah la xiray isla markii uu bilaabmay howsha rakibidda Taasi waa, rakibida Android 10 waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo, ama dhowr saacadood, iyadoo kuxiran nasiibadaada.
Ka dib oo dhan, waad sugi kartaa inta hawshu socoto, ama waa inaad ku noqotaa Android 9.0 Pie, oo aad howsha oo dhan mar labaad sameysaa… Laakiin tani xitaa ma aha tan ugu daran!
Android 10 wuxuu dilaa dhamaan dareemayaasha taleefanka casriga ah ee Google Pixel
Haddii aadan aqoon, Android 10 ayaa horeyba loo sii daayay Pixel, Pixel 2, Pixel 3 iyo Pixel 3a (noocyada XL ayaa lagu daray). Taasi waxay tiri, inbadan oo adeegsada aaladahaan waxay jawaabtooda ku dhajiyeen barta ‘XDA’. (Fiiri halkan)
Ka boodista Android Pie ilaa Android Q, adoo raadinaya xal! Laakiin wali wax lama helin. Markaa haddii aad dhacdo inaad haysato taleefanka casriga ah ee ‘Pixel’, waxay noqon kartaa fikrad fiican inaad la joogto Pie illaa Google ay xalliso dhibaatadan.
Qalabka cusub ee Android 10 ayaa soo baxay laakiin mar horeba wuxuu leeyahay bug xun – Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan? Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose.
Android 10 waxay haysaa war ku saabsan taleefanka casriga ah ee loo yaqaan ‘malfunction’!
Ka dib sii deynno badan oo beta ah bilihii la soo dhaafay, nooca ugu dambeeyay ee Android ayaa ugu dambeyntii la sii daayay shalay. Ka dib markii laga saaray macmacaanka iyo heesaha, Google wuxuu go’aansaday inuu si fudud ugu yeero Android 10. La yaab ma ahan, nooca cusub wuxuu la yimid dhowr hagaajin wax qabad iyo ka sareysa dhammaan muuqaalada badan. Horeba maanta waxaan uga hadalnay Biyo-qabashada cajiibka ah ee Android 10 u sameyso OnePlus 7 Pro. Hadda waxaa jira war dheeraad ah.
Midda koowaad waa ogaanshaha “faddaraynta”. Taasi waa, muuqaal muujinaya dekedaha USB-ga casriga ah markii dareere ama qashin burburin gudaha ah. Runtii tani maahan war weyn oo loogu talagalay Samsung, oo horay muuqaalkan ugu soo qaatay aaladooda. Si kasta ha noqotee, Android 10 ayaa si otomaatig ah u muujin doonta ogeysiin haddii walax laga soo helo albaabka, iyada oo la ogeysiinayo in mar kale la hawlgeliyo markii loo arko inay amaan tahay. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale leedahay ikhtiyaar inaad gacanta ku qabato albaabka haddii xaqiiq been ah la arko ama nadiifinta ka dib. Samsungkan ma sameeyo.
Akhri inta hartay halkan.